हसिया खाएर पनि भाग्यले बाँचेका नवराजका साथीले खुल यस्तो रहस्य, प्रहरी नआएकाे भए हामी बाँच्ने थिएनाै (भिडियो) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > हसिया खाएर पनि भाग्यले बाँचेका नवराजका साथीले खुल यस्तो रहस्य, प्रहरी नआएकाे भए हामी बाँच्ने थिएनाै (भिडियो)
admin May 31, 2020 May 31, 2020 भिडियो, समाचार	0
नवराजसंगै रुकुम गएका केही युवाहरुले घटनाका बारेमा नयाँ कुरा खुलाएका छन् । उनीहरुले आफुहरु १९ जनाको समुहमा गएको स्वीकार गरेका छन् । आफुहरु फर्कन लागेको बेलामा गाउँका ठुलो भिडि आएको देखेर आफुहरु डराएर भागेको बयान दिएका छन् । सो घटनामा बाँचेर फर्कीएकाहरुले आफुहरुलाई आ’क्रमण भएको बताएका छन् । भेरीको पुल नाघेर बाँचेका दुई जना नवराजका साथीहरुले आफुहरु भागेर बाँचेपछि उनीहरु पनि भागे होलान् भन्ने ठानेको बताए ।
२१ वर्षका नवराज विक, १७ वर्षकी युवतीसंग प्रेम सम्बन्धमा थिए । नवराजले गएको शनिवार वेहुली लिन भन्दै अन्य १८ जना साथी लिएर गएका थिए । नवराजले आफुहरुलाई वेहुली भगाउन जाने भनेर फोन गरेपछि आफुहरु गाउँवा १० जना गएको बताए । वाटोमा अरु साथीहरु मिसिएर १९ जना भएर युवतीको गाउँ गएको बताए । उनीहरु युवतीको घर नजिकैको वाटोवाट जाँदाखेरी युवतीको आमाले देखेपछि, ए डुम तँ फेरी आइस् भन्दै भनेको उनीहरुले बताएका छन् ।
नवराजलाई युवतीको आमाले पहिल्यै देखि चिनेको हुनसक्ने भएकाले देख्ने बित्तिकै त्यस्तो भनेको उनीहरुको भनाई छ । उनीहरुको कुरा भएको थियो की के हो त्यो त थाहा भएन, संगै गएका एक जना साथीले भने, हामीलाई देख्ने बित्तिकै युवतीको आमाले ए डुँम त फेरी आइस् ? भनेर भन्नुभयो । पहिलाको चोट खाएर पुगेन ? अब म रेर जान्छन् । आमाले त्यसो भनेपछि आफुहरु फर्केर घर फर्कन लागेपछि मथिवाट ठूलो हुला आएर आफुहरु माथि आ’क्रमण भएको बताए ।
ढुं’गा, मु’ढा, हँ’सियाले हा’नेको उनीहरुले बताएका छन् । हँ’सियाको पछाडीको भागले आफुहरुलाई हा’नेको उनले बताए । त्यस्तो बेलामा को कता भाग्यो थाहा नै भएन । सबैजना भाग्न तिर लाग्यो । हामीले उनीहरु पनि भागे होलान् भन्ने लाग्यो उनले भने । आफुहरुलाई देख्ने बित्तीकै युवतीको आमाले अध्यक्षलाई फोन गर्न भनेको पनि आफुहरुले सुनेको बताए । युवतीको आमाले वडाध्यक्षलाई फोन गरेर २, ३ गाडी मगा भनेर भनेको आफुहरुले सुनेको बताए ।
लकडाउनको बेलामा किन नवराजले यस्तो कनि डिसिजन गर्यो भन्ने आफुलाई थाहा नभएको बताए । करिब तीन वर्ष देखि उनीहरुको बिचमा प्रेम रहेको भन्ने कुरा आफुहरुलाई थाहा भएको बताए । एसइइ दिने बेलामा पनि नवराज युवतीको कोठामा गएर बसेको उनीहरुको भनाई छ । गाउँलेले हा’निरहेकै बेलामा २ जना प्रहरी आएर आफुहरुलाई बचाएको बताए । पछि अरु प्रहरी थपिएर १२ जनालाई नियन्त्रणमा लगेको बताए ।
आजकाे प्रतिनिधिसभा बैठकमा बाबुराम भट्टराईले यस्तो अचम्मको माग राखेपछि…
परपुरुष सङ्ग प्रेम सम्बन्ध जोगाउन आफ्नै आमाले चार वर्षीया छोरालाई विष खुवाई हत्या (पूरा हेरि सक्दो शेयर गरौ )
प्रहरीले पक्राउ गरेका दिलिपसिंह विष्ट रिहा हूनुमा खुल्यो यस्तो रहस्य ,प्रहरीनै पर्यो झन ठुल्यो शंकामा